Atletisma – France : namono ny « record de Mada » i Saholinirina | NewsMada
Atletisma – France : namono ny « record de Mada » i Saholinirina
Mihatsara hatrany. Namono ny zava-bita tsara indrindra nasionaly, izay vitany teo aloha, i Saholinirina Eliane teo amin’ny 3.000 m steeple, taranja atletisma. Tany Montbéliard no nahavitany izany.
Nanamafy ny maha laharana voalohany nasionaly azy eo amin’ny taranja atletsima i Saholinirina Eliane. Raha ny fampitam-baovao mantsy, namono ny “record de Madagascar” na zava-bita tsara indrindra nasionaly teo amin’ny taranjam-pifaninanana 3.000 m steeple ity atleta malagasy milalao any ivelany ity.
Niatrika fifaninanana tao Montbéliard, Frantsa, ny tenany ka vitany tao anatin’ny 9’45’’28 ny fifaninanana teo amin’io 3.000 m steeple io raha 9’47’’57 no namitany izany tany aloha. Marihina fa tamin’ny fiatrehany ny “Lalao Olympika 2012” na J.O 2012 tany Londres, Angletera, no namitany io zava-bita tsara indrindra nasionaly farany nomontsaniny io.
Na izany aza anefa, hatreto, tsy mbola tafiditra sy nahazo ny “minima” hahafahana mandray anjara amin’ny J.O 2016 any Rio, Brezila, i Saholinirina Eliane. Marihina mantsy fa 9’45’’ ny “minima” eo amin’io 3.000 m steeple io. Noho izany, mila mahazo latsak’io fe-potoana io izany ny atleta iray mifaninana eo amin’io taranjam-pifaninanana iray mandrafitra ny atletisma io vao afaka mifaninana amin’ny J.O 2016 any Rio.
Mbola mila miezaka hatrany ity atleta malagasy milalao any ivelany ity amin’ny fahazoana ny “minima” amin’ny J.O. Tsy azo mora anefa izany fa tsy maintsy miady mafy sy manamafy ny fanazarantena hatrany.